Wararka Suuqa Caawa: Barcelona War Kasoo Saartay Heshiisyada Fati Iyo Pedri, Xanta Paul Pogba Iyo Qodobo Kale
HomeWararka CiyaarahaWararka Suuqa Caawa: Barcelona War kasoo saartay Heshiisyada Fati iyo Pedri, Xanta Paul Pogba iyo Qodobo kale
Juventus ayaa u soo bandhigi doonta Fiorentina xidiga Dejan Kulusevski si ay isugu dayaan inay hoos u dhigaan qiimaha Dusan Vlahovic. Corriere dello Sport
Barcelona ayaa ku kalsoon in Heshiisyada Cusub ee Ansu Fati iyo Pedri lagu dhawaaqidoono dhawaan Goal
Newcastle ayaa isku diyaarineysa inay bisha Janaayo dalab ka gudbiso Celement Lenglet, sida ay qortay Sport .
Juventus ayaa dooneysa inay iska iibiso Adrien Rabiot bisha Janaayo maadaama ciyaaryahanka khadka dhexe uusan awoodin inuu soo jiito tababare Massimiliano Allegri. Kooxda ka ciyaarta Serie A ayaa rajeyneysa inay keensato xiddig kale oo khadka dhexe ah Calciomercato.it
Barcelona ayaa ka fiirsaneysa inay u dhaqaaqdo Fabio Blanco bisha Janaayo, Kooxda reer Catalan ayaa xiiseyneysay 17 jirkaan garabka ka ciyaara ka hor inta uusan ka tagin Valencia kuna biiray Bayer Leverkusen Sport
Newcastle ayaa qarka u saaran inay u dhaqaaqdo Wesley Fofana, sida laga soo xigtay RMC .
Atletico Madrid iyo Paris Saint -Germain ayaa labaduba isha ku haya xiddiga qadka dhexe ee Inter Nicolo Barella – sida laga soo xigtay Calcio Mercato .
Alexandre Lacazette ayaan dooneynin inuu sii dheereeyo joogitaankiisa Arsenal dhamaadka xilli ciyaareedkaan – sida laga soo xigtay Football London .
Newcastle ayaa qorsheyneysa inay u dhaqaaqdo weeraryahanka Real Madrid Mariano Diaz – sida laga soo xigtay Todofichajes .
Juventus ay u baahan tahay inay u soo bandhigto Paul Pogba 10 milyan oo euro sanadkii (£ 8m/$ 12m) si ay ugu soo celiso Turin. Tuttomercatoweb
Inter ayaa u aqoonsatay daafaca Borussia Monchengladbach Matthias Ginter bartilmaameedka suuqa kala iibsiga – sida laga soo xigtay Calcio Mercato .